Ra’iisul wasaaraha iyo wafdi la socday oo dib ugu soo laabtay dalka – Radio Muqdisho
Ra’iisul wasaaraha iyo wafdi la socday oo dib ugu soo laabtay dalka
Ra’iisul wasaaraha Xukumadda Federalka Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashid Cali Sharma’arke iyo wafdi uu hogaminayo oo safar muddo saddex cisho qaatay ku tagay dalka Qatar ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay, waxaana garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan labada gole ee dowladda.
Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Ra’iisul wasaraha dalka iyo wafdigiisa ayaa inti ku sugmayeen magalada Doha ee xarunta dalka Qatar , iyadoo Wasiiradii la socday waxaa ay heshiisyo wax tar u leh dalka iyo dadka Soomaliyeed ay lasoo galen Madaxda dowladda Qatar ,
Heshiistadaasi ayaa la xariiray dhinaca waxbarashada iyo duulista hawada . waxaana Soomaaliya u kala saxiixay Wasiiradda dulisya hawada iyo arrimaha dibadda.
Safarka Ra’iisul wasaaraha Dalka uu ku tegay dalka Qatar ayaa qayb ka ah qorsha dowladda ay ku xoojineyso xariirka ay Soomaaliya la leedahay dalalka caalamka.
Xoojinta amniga degmada Xamarweyne oo laga shiray "SAWIRRO"